R/wasaare ku xigeenka dalka oo booqanaya Baydhabo | Baydhabo Online
R/wasaare ku xigeenka dalka oo booqanaya Baydhabo
Ra’iisul wasaare ku_xigeenka Xukuumadda soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa maanta gaaray magaaladda Baydhabo ee xarunta kmg ,dowladd gobaleedka Koonfur galbeed . iydoo wafdiga uu hogaaminayo Ra”iisul wasaare ku_xigeenka waxaa ka mid ah masuulayiin ka socda labada gole dowladda ,saraakiil ka tirsan Ciidanka qalabka sida, iyo masuulayiin kale.
Marka ay gaareen wafdiga garoonka diyaaradda ee magaalada baydhabo waxaa ku soo dhaweyay. Masuulayiin ka tirsan maamulka Koonfur galbeed somaaliya uu ka mid ah yahay madaxweynaha maamulka koofur galbeed somalaiya mudane shariif xasan sheikh aadan.
Madaxweynaha Dowladd gobaleedka koonfur galbeed,Mudnae Shariif Xasan Shiekh Aadan,oo la hadlay warbaahinta , ayaa sheegay in ay sugiyeen wafdigan mduooyinkii dabe ayna ku faraxsan yahiin in maanta ay soo gaaran .magaaladda baydhabo,ee gobalka baay.
Ra”iisul wasaare Ku_xigeenka Xukuumadda Somaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte Qaalib, oo la ahdlay warbaahinta ayaa waxuu sheegay in ujeeda ay u soo gaareen magaaladda baydhabo,ay tahay in kulamo ay la qaataan masuulayiinta maamulka.ayna ka wada hadlayaan, xoojinta amniga , iyo iskaashi dhinacayada hormarka .
UJeedada socdaalka wafdiga ayaa ah sidii dowladd gobaleedyada dalka loola yeelan lahaa wada tashi ku aadan siyaasadda amniga Qaranka.